Ngeke kuze kube umkhosi ukhahlela off, ngakho-ke qiniseka ukuthi uzilungiselele ngeTomorrowland ngamathikithi esitimela. Tomorrowland kuyenzeka ngezimpelasonto ezimbili 2018. Kuyinto ezimbili zokugcina ngempelasonto ngoJulayi: 20-22d bilan futhi 27- 29th. Ukubutha, okuyinto umcimbi pre-mkhosi beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni e Dreamville, senzeka ngo-July 19 bese Julayi 26th ngezimpelasonto 2.
I-Tomorrowland ayinambuzo ngomkhosi womculo ongcono kakhulu emhlabeni. Amazwe amaningi aseTomorrowland kunase-Olimpiki. Kuyinto ngempela engavamile futhi indlela ephelele ukuzizwa axhunyiwe. Minyaka yonke likhula nakakhulu, ngakho musa uthole abanqotshwa izixuku ngokuba ungakulungele, ukufika Tomorrowland ngu zemininingwane.
Tomorrowland lwenzeka ngesikhathi indawo yokuzilibazisa, De Schorre, eBoom. Idolobha laseBoom likhona Belgium, phakathi Antwerp & Brussels. Lokhu edolobheni elincane siguqule scene party. Ngokuvamile idolobha elithule bona sibonise Tomorrowland amafulegi emafasiteleni abo ngomkhosi.
Yehla esiteshini seBoom bese uthatha i-shuttle yebhasi yamahhala eya eTomorrowland / DreamVille. Ngemva kwakuwusuku lomkhosi ngamunye, ezintathu ezengeziwe izitimela ebusuku Kuzoze Antwerp Central Station.
Manje njengoba sikunikeze imininingwane zikanokusho ku Tomorrowland ngu zemininingwane, sekuyisikhathi sokuba fun okuyingxenye! Uma sekuyisikhathi sakho sokuqala uya Tomorrowland, wena Hleze niyazibuza ukuthi kuzoba sengathi. Tomorrowland Kuyazuzisa ngempela hype ukuthi zidalwe emhlabeni ke. Tomorrowland uvotelwe ongenambangi enkulu EDM music festival emhlabeni iminyaka eminingi egijima. Ukuvakashela okungenani kanye esikhathini sokuphila komuntu uye waba kumelwe nakanjani yimuphi fan umculo, party goer noma umkhosi Umthandi womculo. Tomorrowland 2018 ulolonga ukuba mkhulu emlandweni womkhosi. Inenani elimangazayo labaculi bamazwe aphesheya abahlelelwe ukukhanyisa i- 16 izigaba Amazing.
Ngaphandle kokuthi uhlelo Amazing, kubonakale abagqugquzeli ukuba akucabange konke, kuhlanganise ikhabethe ungakwazi ukuqasha, izindawo ukushaja ifoni yakho ngisho lwemali yabo ngokuthi Amaparele. Une ongakhetha ezahlukene phezulu-up Isongo yakho nge Amaparele: Ungangeza Amaparele ku-inthanethi ku -Akhawunti Tomorrowland, ngesikhathi ithebhu 'Isongo yami’ ngaphambi komkhosi nge-credit card yakho (Visa, Mastercard), Bancontact, Sofortüberweisung noma iDeal. Lokhu kuba yindawo lapho ungashiya khona konke ukukhathazeka kwakho ngemuva!
Noma yikuphi athenge amathikithi esitimela ngemali European, futhi ikakhulukazi Tomorrowland ngu zemininingwane esuka kulo lonke elaseYurophu, nje Faka Londoloza Isitimela iwebhusayithi futhi ujabulele isitimela sakho Ukugibela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftomorrowland-by-train%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Boom Brussels Tomorrowland imvuenline